Asa sy fampandrosoana | SEFAFI
Tamin’ny oktobra 2015 ny governemanta dia nanainga ny Politikam-Pirenena momba ny Asa sy ny Fiofanana araka Asa, niara-noketrehina tamin’ny BIT1 sy ny UNESCO2. Izany politika izany dia noheverina hoenti-manatontosa ny fanirian’ny Fanjakana hampisonanina ny tsirairay ao anaty fiainana milamina ; izany dia mitaky ny tsy maintsy anaovany izay hahatonga « ny ankamaroan’ny Malagasy ho olom-pirenena nahazo fanabeazana ara-tsaina sy fahaiza-manao hahafahany mamorona sy mahita asa mendrika, ao anatin’ny fanajana tanteraka ny fitoviana raha misy fisokafana ho an’ny asa ao amin’ny tontolo ara-toekarena, arahin’ny fanafoanana marina ny antony rehetra mampisy fanilikilihana ara-piarahamonina sy ny fanavakavahana, anisan’izany ny fanavahana ny lahy sy ny vavy sy ny sokajin’ny olona osaosa toy ireo manana fahasembanana ». Ny zavatra roa lehibe mandrafitra azy, fepetra tsy maintsy fenoina raha tiana ho tanteraka ny « fanovana ny firenena ara-tsosialy sy ara-toekarena », dia ny fampandrosoana ny fahaiza-manao ho fanatsarana ny olona raisina hiasa, ary ny fampiroboroboana ny fepetra/tetika manamora ny famoronana asa sy ny fiarovana azy.
Ny 7 mey 2015, ny Fanjakana malagasy nosoloin’ny praiminisitra tena, ny mpiara-miombona antoka nosoloin’ny CTM3 sy ny GEM4 tena, ary ny BIT dia nanao sonia ny taratasy mirakitra ny fifanarahana ny Fandaharam-Pirenena ho an’i Madagasikara 2015-2019 ho an’ny Asa Mendrika (PPTD). Misy laharam-pahamehana roa misongadina : « (i) Hamoraina ny fandraisana ny sokajin’olona osaosa hiasa amin’ny alalan’ny fanamafisana ny fahaizany asa ary amin’ny alalan’ny fampirisihana ny sehatra miteraka asa, ary (ii) Hatsaraina ny vokatra avy amin’ ny asa amin’ny alalan’ny fifanakalozan-kevitra ara-tsosialy, ny lalàna sy ny zo fototra momba ny asa sy ny fiarovana ara-tsosialy ».
Etsy an-daniny, ny fankalazana ny fahazato taonan’ny Foibe Iraisam-pirenena momba ny Asa izay hatao amin’ny 2019 dia natomboka andro vitsivitsy lasa izay tamin’ny alalan’ny fakana ny hevitry ny vahoaka nandritra ilay hetsika hoe « ny hoavin’ny asa ». Nisy lafiny efatra tao amin’io hetsika io : asa sy fiarahamonina, asa mendrika ho an’ny rehetra, ny fandaminana ny asa sy ny famokarana, ny fitantanana ny asa.
Kabary tsara lahatra sy asa marina ataon’ny fanjakana
Tofoky ny kabary tsara lahatra sy ny safo siaka mampandry adrisa ny vahoaka, leon’ny politika miezinezina sy ambony fitetika nefa tsy misy drafitr’asa maty paika, na mifanipaka amin’ny zava-misy mihitsy aza. Miandry asa fanatanterahana mivaingana izy na dia faran’izay kely fotsiny aza. Saingy tsy mahay mitondra na mpitondra na mpitantana satria, raha tarafina avy amin’ny asa hita-maso, ny mitondra dia sady mamolavola lalàna mifehy ka mampihatra azy, no mamolavola tetik’asa hatolotra ny mpamatsy vola na ny Antenimiera mba hahazoana ny vola hamatsiana sy hanatontosana azy. Raha izay voalaza teo aloha izay no jerena dia tsy ho nisy ny politika na ny fifanarahana raha tsy nentanin’ny BIT. Dia hanahoana ny tohiny ?
Ny didim-panjakana lah. 2016-265 tamin’ny 15 aprily 2016, manendry ny mpikambana ao amin’ny Governemanta Mahafaly, dia tsy niresaka momba ny sampan-daraharaha momba ny asa sy ny lalàna sosialy. Fanadinoana fotsiny ve, sa antsirambina, sa tsy fahaizana, sa mariky ny faniratsirana ? Na izany na tsy izany, solafaka ry zareo ary tsy azo ekena izany. Avy eo dia sady nikaviavia no tratra aoriana nanao izay hanarenana an’ilay toe-javatra tamin’ny alalan’ny naoty5, saingy tsy misy porofo tsara noho io mampiharihary ny hantsana manasaraka ny kabary tsara lahatra sy ny asa ataon’ny governemanta. Ny firindran’ny andrim-panjakana amin’ny fandaminana ny minisitera, araka ny fitsipika tsy maintsy arahina sy tsy azo ampandeferina ho an’ny asan’ny governemanta, tsy misy afa-tsy izay ihany no marika hamantarana ny tena « governemanta miady » marina.
Ankoatra izany, ny alahady 1° mey, andro iraisam-pirenena ho an’ny asa, ny minisitry ny Asam-Panjakana, ny Fanavaozana ny Fitondrana, ny Asa ary ny Lalàna Sosialy, dia tsy nihambahamba akory nanambara, ho valin’ny fanontaniana nipetraka tao amin’ny fandaharan’ny Fampielezampeom-Pirenena Savaravina, fa « mandeha tsara » ny fifanakalozan-kevitra ara-tsosialy eto Madagasikara, fa ny CNT (Filankevi-Pirenena ho an’ny Asa) dia efa mijoro ary efa am-perin’asa nanomboka ny volana janoary 2016. Azon’Andriamatoa Minisitra tanisaina ve ny didim-pitondrana manendry ny mpikambana ao amin’ny CNT ? Rehefa natao ny fanadihadiana, dia mazava ny tenin’ ireo tompon’andraikitra voalohany sy ny mpiara-miombona antoka ara-tsosialy : « Tsy mbola am-perin’asa ny CNT ary ny Fanjakana dia misandoka ny andrakitra sy ny asan’ny CNT ».
Santionany amin’izany, ny didim-panjakana lah. 2016-058 mametra ny lisitry ny andro tsy iasana fa andraisan-karama ho an’ny taona 20166, nankatoavina ny 26 janoary 2016, dia milaza any amin’ny filazana ny antony fa nankatoavina ilay izy « rehefa avy nanontany ny hevitry mpiara-miombona antoka ara-tsosialy ». Tena nanontaniana tokoa ny hevitry ny mpiara-miombona antoka ara-tsosialy, fa tsy ny an’ny CNT. Raha izy governemanta aza tsy mampihatra amin’ny fomba hentitra ny didy aman-dalàna manan-kery, toy ny andininy 81 ao amin’ny Lalàna mifehy ny asa, azo lazaina ve fa mitondra io governemanta io ? Ny fananganana ny CNT dia fanehoana miharihary fa miasa ny governemanta. Io ohatra mampiseho asa mora atao io, ary betsaka ny asa toy izany, dia mety hampandroso ny raharaha izay mihisatra dia mihisatra noho tsy fisian’ny herijika sy ny fahaiza-manao avy any amin’ny mpitondra antsika.
Tsy afaka ny tsy hampahatsiahy eto koa fa misy Lalàna vaovao mifehy ny Fiahiana ara-tSosialy novolavolaina tamin’ny alalan’ny fampandraisana anjara rehefa avy naka hevitra sy niara-nidinika tamin’olona maro be, taona vitsivitsy lasa izay. Mbola tsy natolotry ny Governemanta mba hankatoavin’ny Antenimiera foana hatramin’izao io lalàna mahasoa ny tontolon’ny asa io. Tena mahavalalanina ny saina.
Ary farany, tsiahivina fa ny ankamaroan’ireny lalàna fampiharana ny Fitsipika mifehy ny asa eto amintsika ireny, izay efa nohavaozina matetika hatramin’ny nahazoana ny fahaleovantena, dia nolovaina tamin’ny Lalàna Ankapobeny mifehy Asa noforonin’ny Fanaraha-maso Ankapobeny ny Asa sy ny Lalàna Sosialin’ny Komisarià-Ambonin’ny Repoblika Frantsay teto Madagasikara sy ny Nosy manodidina azy, niaraka tamin’ny komity fakana hevitra momba ny asa mitovy isa, tamin’ny taona 1950. Firenena mahaleo tena sy masi-mandidy i Madagasikara ka tokony hisikim-ponitra haingana dia haingana hanangana lalàna mifehy ny asa azy manokana, fa tsy hanao fotsiny izay hampitombo ny asa tadiavin’ny mpanao politika voalaza etsy ambony hoforonina sy hohatsaraina.
Manangana amin’ny alalan’ny fifanakalozan-kevitra fa tsy amin’ny alalan’ny lainga
« Omena laka ny fifanakalozan-kevitra tena izy »7 : io filazana navoakan’ny SeFaFi ny 17 desambra 2014 io dia mampalahelo fa mbola mitombina foana hatramin’izao. Ny fifanakalozan-kevitra, hamafisin’ny kolontsaina Malagasy mifototra amin’ny teny ierana, dia anisan’ny laharam-pahamehana raha tiana hatanjaka ny Fanjakana, raha tiana hiverina ny fitokisana ka hiorina ny tena fitoniana marina. Satria tsy eo ambonin’ny lainga mihitsy akory no hananganana ny fahefam-Panjakana. Tsy sasatra ny mamerimberina izahay, ny tontolon’ny asa sy ny singa rehetra miaraka aminy no foiben’ny fiarenana ara-toekarena sy ny rariny ara-piarahamonina. Fa inona anefa no zava-misy ? Tena noraisin’ny Malagasy ho azy marina ve ny tolo-kevitra rehetra avy any amin’ny OIT ? Tapa-kevitra ve isika fa sady hanaraka ny lalana mankany amin’ny fifanakalozan-kevitra marina, no hampifantoka ireny tolo-kevitra rehetra ireny ao anatin’ny zava-misy iainantsika ?
Nisy fandinihana goavana navoakan’ny OIT mikasika ny hoavin’ny asa. Haharitra hatramin’ny 2019 izy io, fahazato taonan’io Fikambanana io. Vitan’i Madagasikara ny azy ny fakana ny hevitry ny vahoaka mikasika an’io tolo-kevitry ny OIT io ; tsy hahazo tombontsoa amin’izany anefa i Madagasikara sy ny Malagasy raha tsy raisintsika ho tena antsika tokoa izy io ka isika no ho voalohany indrindra amin’ny fampiharana azy. Ny toko telo natoron’ny Fifanarahana lah. 144-n’ny OIT, izay azo velarina hankany amin’ny fiarahamonim-pirenena, dia manolotra sehatra iray tena tsara hanaovana azy, saingy tsy maintsy eo marina aloha ny finiavana politika. Ao anatin’ny fotoana fohy dia tsy maintsy kofokofohina indray ny CNT8 ho an’ny asa, ary ny CNSPERP (Komitim-Pirenena Manara-maso ny Fampitomboana ny Asa sy ny Fampihenana ny Fahantrana)9 ho an’ny fampiasana sy ny fiofanana araka asa. Ao anatin’ny fotoana antonony dia tokony hojerena raha mety ny hirosoana na tsia amin’ny fananganana ny CESC (Filankevitra ara-toekarena, Sosialy ary Kolontsaina)10 ka handinika ny famavaniny amin’ireo filankevitra fakan-kevitra isan-tokony avy. Raha eny, dia anjaran’ny fiarahamonim-pirenena sy ny tontolo ara-toekarena ny mandray an-tanana an’io fananganana io, ny Fanjakana kosa dia voafetra tsy hitondra afa-tsy ny fanampiana ara-tekinika.
Izay voalaza teo aloha rehetra izay dia tsy mikasika afa-tsy ny asa manara-penitra, ny fampiasana anefa dia mikasika koa ny sehatra tsy manara-penitra sy ny tontolo any ambanivohitra. Io sehatra io dia miankina indrindra amin’ny toekarena miroborobo aloha ka afaka mandray mpiasa, avy eo dia miankina koa amin’ny olona ampiasaina, tsara ofana sy mifanentana amin’ny tontolon’ny asa maoderina. Tanora aman’hetsiny maro tonga eo amin’ny tsenan’ny asa no voakasik’izany isan-taona. Tsy raharaha-na minisitera tokana fotsiny izy io fa tokony hahazo laka amin’ny asan’ny minisitera tsirairay noho izy tokony ho vaindohan-draharahan’ny governemanta manontolo. Raharahan’ny rehetra ny asa.
Ny ohatra hita momba ny asa dia mampiseho ny aretina mahazo satria mampibaribary loatra ny fihanahanan’ny governemanta. Tsy mifanaraka velively amin’ny asa sy ny vokatra ny kabary sy ny fampanantenana, ary izany no mitsoka ny afom-pahatezeran’ny vahoaka rehetra amin’ny ankapobeny.
1 Birao Iraisam-pirenena momba ny Asa.
2 Sampan-draharahan’ny Firenena Mikambana misahana ny Fanabeazana, ny siansa ary ny kolontsaina.
3 Fikambanan’ny Mpiasa eto Madagasikara.
4 Fivondronan’ny Orinasa eto Madagasikara.
5 Naotin’ny filankevitra lah. 031/2016-PM/SGG/SC ny 20 aprily 2016 ; naoty naparitaka lah. 108 MFPRATLS/SG/2016 ny 25 aprily 2016 izay nanova ny anaran’ny minisitera ho « Minisiteran’ny Asam-Panjakana, ny fanavaozana ny Fitondrana, ny Asa sy ny Lalàna Sosialy ».
6 Ny SeFaFi dia efa nanamarika fa io didim-panjakana io dia ahitana fepetra tsy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana. Mikasika ny andro tsy fiasana izany, tsy iasana fa andraisan-karama, ho an’ny silamo fotsiny ihany. Fepetra manavakavaka io, nefa ny silamo dia misitraka koa ny andro tsy fiasana avy amin’ny finoana kristiana. Azo atao ny mampivoatra ny fepetra ankehitriny raha maka hevitra avy amin’ny fanaon’ny Maorisiana. Fa tena tsy azo ekena kosa ny fanitsakitsahan’ny Fanjakana ny Lalàmpanorenana sy ny lalàna.
7 SeFaFi, Misavorovoro fiatomboka ny Repoblika faha-IV, 2015, tak. 73-77.
8 Fanararaotra koa io mba hahatonga ilay fikarohana, natao tamin’ny 2013 ary novatsian’ny BIT vola, hitondra tombontsoa, mikasika ny fanavaozana ny rafitry ny CNT sy ny rantsa-mangaikany any amin’ny faritra.
9 Natsangan’ny didim-panjakana lah. 2005-057 ny 25 janoary 2005.
10 Andininy 105 ao amin’ny Lalàmpanorenana.
Antananarivo, androany faha-04 Jiona 2016